Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): July 2015
ကချင် IDPs Camp ရောက် Angelina Jolie (video-Su Myat)
at 7/31/2015 10:56:00 AM
Angelina Jolie visits Jan Mai Kaung refugee camp in Myitkyina, Kachin State, Myanmar
at 7/31/2015 10:44:00 AM
Actress Angelina Jolie Pitt, left, United Nations High Commissioner for Refugees special envoy and co-founder of the Preventing Sexual Violence Initiative, visits Jan Mai Kaung refugee camp in Myitkyina, Kachin State, Myanmar, Thursday, July 30, 2015.
The refugees have fled fighting between the Burmese government and the Kachin Independence Army since 2011. (AP Photo/Hkun Lat)
Wunpawng sha niamyit hkrum lam hte mung masa lam
at 7/31/2015 10:24:00 AM
Kachin Politics Watch and Research Network, Jinghpaw Mung Masa Yu Maram hte Sawk Sagawn Hpung gaw, myu sha lawt lam hte anhte myu sha ni myit hkrum mang rum let myu sha lam masa tsawm wa hkra jawm gaw gap ai shara hta lakung lakap tai ai wuhpung langai rai ga ai.
Moi ngai naw kaji ai ten hta Nu ngai hpe lata dun nna hpyen hprawng woi hprawng ai shingran ngai naw mu nga n-ngai. Dai aten hta ngai asak 10-12 ning aten ladaw rai nga ai. Mare baw de sinat ngoi gadu wa jang mare htumpa de woi hprawng ai shingran ni amu nga n-ngai. KIA hte hpu nau Palaung hpyen la ni lai wa jang ngai Nu hpe san san rai n-ngai. Nu ndai hpyenla ni gaw hpa baw hpyen la rai ma ta ngu nna san san re shaloi Nu gaw ndai gaw anhte Jinghpaw hpyenla ni re nga nna tsun dan ai hpe mung shing ran naw mu nga n-ngai. Dai aten hta KIA hpyen la ni hpu nau Palaung hpyen ni hpa majaw nam mare hkan gabrawng hkawm shamu shamawt hkawm ai lam hpe atsawm nchye na tim, shanhte gaw anhteahpyen la rai ma ai ngu ai hpe ntsa lam chye na tawn ai lam rai nga ai.
Ngai bum mare kaw kaba wa ai re majaw bum mare gahtawng hta hpaji jawng tsang kaba ai madang du hkra n-nga ai majaw myo mare de laika jawng tsang loi mi tsaw ai jawng sa lung na matu myo mare de shani sa wa nna laika jawng tsang 6-7 bai matut lung ai aten hta gaw Myen hpyen hte Jinghpaw hpyen hpa majaw gasat hkat nga ma ai ngu ai hpe loi li hkawn hkrang wa ai aten rai nga ai. Rawt malan ginra hta kaba wa ai Jinghpaw kasha ngai gaw, rawt malan ginra hta kaba wa ai majaw rawt malan hpyen ni hpe ngai na myit kata hta grai tsawra kam hpa ai myit ni galoi mung arawng nga ai. Rawt malan ai lam hpe loili chyena wa tim Mung masa “Politics” ngu ai hpe gaw tsep kawp nchye na ai hte maren myi di chyip rai nga ai. Hpa majaw nga yang mung masa ngu ai hpa ta? Ngu ai lachyum hpe gadai mung n-sharin ya, gadai mung nhkai dan ai majaw rai nga ai.
Ngai asak 18 ning jan wa ai aten hta gaw rawt malanalam grau grau hkawn hkrang wa sai, rawt malanalam grau grau hkawn hkrang wa ai rai tim, rawt malan ai lamasung htum ai lachyum hpe atsawm nchye na ai majaw rawt malan hpyen ni hpyen lahkawn nga matu shamu shamawt wa jang Kanu Kawa makyin jing hku ni gaw rawt malan hpyen ni hpyen lahkawn na hkyen masai hprawng mu nga tsun tsun rai ma ai.
4 cut4( Hpyet Ley Hpyet ) hta jam jau ai nam chyim)
Myen hpyen asuya gaw “4 cut 4” masing hpe 1994-96 lapran hta galaw ayai dat masai, dai “4cut 4” masing kaba gaw hpaamatu galaw ma ta? Rawt malan ai wuhpung ni hpe ayai aya shamyit agrawp kau lu na masing rai nga ai. Dai “4 cut 4” masingamajaw hpunau Palaung ni lak nak ap kau ai gaw du mat ra ai re hpe dai ni she atsawm sha adan aleng nan chye na mat ai hku re.
Dai “4 cut 4” masingamajaw hprawng dum bre hkawm ai marang e, nta nga ai du sat yam nga ni hpe mung nkau mi hpe dut kau, nkau mi hpe gaw tinang mare kaw tawn kau da re majaw, gadai wa sat sha kau, dun la kau re hpe mung nchye ai sha du sat yam nga mung hkrat sum hkrum sai. Shaning ting sha na mam mung namemakoi tawn ai rai tim, aten ladaw na na wa hprawng hkawm ra ai majaw nai mam ni mung yet mat nna shaning mi ram hkai nu shat shalaw let hpa hpa sha ai nam chyim hpe mung ya du hkra shingran mu nga ai law. Dai “4 cut 4” masingamajaw ding hku run mat ai dinghku dum nta masha ni law law mung nga lai masai. Dai “4 cut 4” masingamajaw jam jau ai nam chyim hpe tsun jang myit n-gut ai lam sha lu la ai. Tsun mung tsun nma ai.
Jinghpaw niamung masa hte seng ai American la wa hte dung jahta ai lam
“Federal” hte awm dawm shang lawtashai hkat ai lachyum awm dawm ngu ai lachyum gaw tinang mung dan tinang up hkang asuya hte lak san rai nna nga ai mung dan hpe awm dawm shang lawt ngu tsun nhtawm, federal ngu ai lachyum gaw laga myu baw sang ni yawng hte pawng nna mung daw mung dan langai hte langaiakata hta pru nga ai nhprang sut gan ni hpe, jawm gagran sha rai nna gaw de ai mung dan langai masa hpe tsun ai ngu tim nshut nga ai ngu tsun jang, “I agree with your concept” nga nna lawan dik ai hku bai tsun nhtang dat wu ai. Teng teng nga yang shi tsun mayu ai gaw ngai myit pyaw u ga nga nna tsun ai she rai ang sai.
“Federal” ngu ai ga si hpe nkau mi atsawm nchye na ai ni gaw grai hkrit tsang ai lam mung nga ai, madung hku nna shinggyim masha ni gaw mu mada hkam la ai lam nbung ai majaw “Federal” ngu ai ga si hpe hkrit tsang ma ai nga nna dai American la wa tsun ai. Yak dik htum gaw hpa ta?“Federal” kaw ning gam langai lahkam lai nna tsep kawp awm dawm ai mung dan de sa na kun ngu ai gaw yak dik rai nga ai. Mung masa ahkang aya hte sut masa, akyu ara hpe mu jut nbung ai majaw ndai hku daw dan na hpe mung ram ram yak nga ai. Rai tim ngai na ningmu hku nna tsun ga nga jang Awm Dawm ai shang lawt de sa na rai jang “Federal” ga si hpe jai lang taw ai gaw ram ram sawn dinglik yu ra ai bungli kaba langai rai nga ai.
Ngai na myit masin hta dai American mung masa hpun tang hpaji rawng ai waaga hpe ngai nkau mi hkap la ai rai tim, ma hkra gaw ngai hku nna nhkap la lu nga ai, hpa majaw ta? Shi gaw American masha rai nna mung masa sawk sagawn ai hpaji ning hkring wa re hte maren, Jinghpaw wunpawng shaahkam sha mu mada ai hte byin mayu ai myit masin hpe gaw tsep kawp chye na ai wa nrai nga lu ai. Dai zawn shiatsun shaga ai ga hpe ma hkra nhkap la ai hte maren shi hte tsun shaga ai mabyin masa hta la kap nna kaga Jinghpaw mung masa hte, hpaji kungkyang ai salang ni hpe mung ngai hku nna grai hkrum shaga yu sai. Dai zawn tsun jahta hkawm yu ai shaloi mung Jinghpaw salang niaga manau mung grai wa shai ai lam n-nga ai hpe mu lu ai.
Ya yang na rawt malan hpung niaahkaw ahkang kaja
Ya yang Myen mung dan hta mung masa ahkaw ahkang hpe she la ga nga yang kam ai hku mai galaw ai aten re, asan tsun ga nga yang “ KA HTA RIM RAWNG TAWN AI U HPE GALOI SAT MAYU TIM” mai ai hpa rai taw nga ai. Dai gaw hpa ta? Myen mung dan Myo mare kaba de mung masa ahkang aya gashun hkat nna lagaw gari gawa rai taw nga ai aten re. Anhte Myu sha baw sang mung masa pati ni mung ahkaw ahkang kaba mai la ai aten re. Myu sha baw sang mung masa pati ni hte rawt malan hpung ni lata gindun nna ahkaw ahkang la mai ai aten mung re. Dai ahkaw ahkang ni hpe galaw na matu dai ning 2015 shaning kaw nah pang taw sai re, rai tim aten majoi shaloi kau jang gaw “ Mung masa balen lunghkrung shachyaw taw ai ni” shanhte ra ai plan hpe shangang shakang kau lu jang gaw hkum sa myit dam nu.
Mung masa ahkang, sut masa ahkang, hpyen masa ahkang ni yawng hpe ndai aten hta lahkrip ra ra galaw la mai nga ai, n-gun shaja la mai nga ai, ra lata poi mahtai hpe sha la nna n-gup mahka nga yang gaw aten loi mi lai mat jang, dai ahkaw ahkang ni akrin akraw rai mat na masa nga wa chye ai ngu tim nshut nga ai.
Masa hpe asan sha galaw ra ai
Anhte myu ni hta mung masa hte masa ma hkra hpe jum nga ai ningbaw ningla ni yawng “San Pra ai masa hpe dan dan leng leng jum tek nna hkan nang hkan sa nga ai ni mung dai san pra ai masa kata hta hkawm sa shamu shamawt ra na rai ga ai. Nkau mi “Federal” tsun nna nkau mi gaw “Awm Dawm Shang Lawt” nga nna tsun jang mung chying mung shawa masha hta myit masa bra mat ai lam byin chye nga ai. Myit masa bra mat na ngu ai lachyum gaw myu sha myit hkrum lam hpe tsun mayu ai nrai nga ai. Mung masa pan dung asan pra nbyin taw ai majaw myit sawn shachyaw la ai lam hta gawng kya mat chye ai lam hpe tsun mayu ai lam rai nga ai. Myit sawn shachyaw la ai lam hta gawng kya mat jang myit hkrum lam hta mung ahtu hkra wa chye nga ai.
at 7/31/2015 10:21:00 AM
at 7/29/2015 10:39:00 AM
မအလက အိန္ဒိယကို သွားနေပြီ။ အိန္ဒိယရောက်တုန်းရောက်ခိုက် အိန္ဒိယတပ်မတော်မှာ ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားတပ်ရင်း (၃၂)ရင်းအကြောင်းကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပါအုံး မအလ။
အခု သွားရတဲ့အကြောင်းက မဏိပူရပြည်နယ်မှာ အိန္ဒိယတပ်မတော်သား (၁၈)ဦးက နာဂသူပုန်လက်ချက်ကြောင့် ကျဆုံးရတာကို ဆွေးနွေးဖို့ပဲမဟုတ်လား။
မဏိပူရနဲ့ ကပ်ရက် အာသံပြည်နယ်ရဲ့ ရှမ်းတပ်ရင်းတွေကိုလည်း လေ့လာခဲ့ပေါ့လေ။
ပြီးတော့မှ စစ်တပ်က မဟုတ်တဲ့ သမ္မတက ဘာကြောင့် စစ်သေနာပတိချုပ်ရာထူးကို ရရှိခဲ့ပါသလဲ၊ တိုင်းရင်းသားတပ်မတော်တွေ ဒီလောက်များနေတဲ့ အိန္ဒိယစစ်တပ်ဟာ တစ်ခုတည်းသော တပ်မတော်လို့ ညွှန်းလို့ရမလား တစ်ခါထဲနဲ့ မေးခဲ့ပါလေ။
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းများစွာ ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ရှိ ပြည်နယ်များရဲ့ (၄)ဆတဲ့ ပိုရှိတဲ့ တပ်ရင်း(၃၂)ရင်းတို့ကို ဘယ်လိုကွပ်ကွဲပါသလဲ ဒါလည်း မေးကြည့်စရာပါပဲ။
တစ်ခါထဲနဲ့ အိန္ဒိယရှိ ပြည်နယ်တွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အကြောင်းကိုလည်း မဖြစ်ဖြစ်အောင် လေ့လာခဲ့ဖို့ လိုပါ့မယ်။ ဂိုအာနဲ့ ဘင်္ဂလိုကိုပဲ မသွားပါနဲ့၊ တတ်နိုင်ရင် ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နဲ့ တမီလ်နာဒူပြည်နယ်ကိုလည်း သွားခဲ့ပါအုံး။ ဒါမှ ဒီရောက်ရင် ဖက်ဒရယ်အကြောင်း ကောင်းကောင်းဆွးနွေးလို့ရမှာပါ။
နောက်ပြီး အိန္ဒိယမှာ ကွန်မြူနစ်သူပုန်တွေ၊ နာဂခွဲထွက်ရေးသူပုန်တွေ ရှိရက်သားနဲ့ အိန္ဒိယစစ်တပ်က ဘာကြောင့် အာဏာမသိမ်းခဲ့သလဲ မေးခဲ့ပါအုံး။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာ ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေက အင်အားယုတ်လျှော့ခဲ့သလား၊ ပိုမိုတိုးတက်လာသလား မေးကြည့်ပါအုံး။
လမ်းလွှဲလို့ ဗုဒ္ဓဂယာဘက်ကို လှည့်မကြည့်ပါနဲ့။ အကုသိုလ်များသူများဟာ ဗုဒ္ဓဂယာကို ရောက်ပြီးတာနဲ့ အပါယ်ငရဲကနေ လွတ်မယ်လို့ မယူဆလိုက်ကြပါနဲ့။ ဗုဒ္ဓဂယာကအပြန် မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါ ဘုန်းကံမကြီး၊ ကြီးခဲ့သော် အသက်မရှည်ဘူးတဲ့။
at 7/29/2015 10:37:00 AM
kawng and2others shared Lwin Thandar Soe's photo.
Mg Thar Noe's status
လွန်ခဲ့တဲ့ ဇန္န၀ါရီလ ၈ ရက်နေ့ ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ တရုတ်နိုင်ငံသား ၁၀၂ ယောက် ကို ယာဉ် ၄၇၀ စီးနဲ့ ဖမ်းမိတယ် ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ပါလာတယ်။
သတင်းထဲမှာ ပါတဲ့ ရွာတွေက ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် မန်ဝိန်းရွာ ရဲ့ တောင်ဖက်မှာ ဆဒုံးမြို့နယ်ခွဲ၊ အပေါ်ဖက်မှာ ချီဖွေလမ်းပေါ်က မန်တောင်ကျေးရွာအထိ၊ အရှေ့ဖက်က လဖိုင်ကျေးရွာ၊ ကြားက ကျေးရွာတွေဖြစ်နေတယ်။
သတင်းစာမှာ ပါတဲ့ ရွာတွေကို အနီရောင် မျဉ်းစောင်းလေးတွေနဲ့ ချယ်ကြည့်တော့ အကွက်ကလေးတကွက် ထွက်လာတယ်။
အရှေ့ဖက်အစွန်းဆုံး လဖိုင်ရွာက ဆက်သွားရင် ဝေါ့ချုန်း၊ ရှင်ကြိုင် ပြီးရင် ကန်ပိုင်တီ နယ်စပ်မြို့လေး ရောက်သွားရော။
ဒီနေရာလေးကို KIA သစ်ခိုးတယ် လို့ MOI က ရေးလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ တဲ့ သတင်းမီဒီယာအတော်များများက မိတ္တူကူးချပြီး ကေအိုင်အေ နဲ့ သစ်ခိုးတယ် လို့ ရေးကြတယ်။
ဦးလနန်ကို အင်တာဗျူးပြီး ရေးတဲ့ သတင်းမီဒီယာ က ၄ ခုလောက် တွေ့မိတယ်။
ဒီတပတ်အတွင်း စည်သူအောင်မြင့်ကလည်း အဲဒီမှာ ဖမ်းတဲ့ တရုတ်တွေကို တသက်တကျွန်း ချတဲ့ အမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကေအိုင်အေ နဲ့ ပူးပေါင်း သစ်ခိုးထုတ်တဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ရေးထားပြန်တယ်။
မျဉ်းစောင်းနဲ့ shading လုပ်ထားတဲက ဒေသလေးကို သုံးသပ်ကြပါအုံးစို့။
၀ိုင်းမော်-ချီဖွေ အထိ လမ်းမတလျှောက်လုံးဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်က ထိန်းချုပ်ထားပြီး ဂိတ်ပေါင်းများလွန်းတဲ့အတွက် ၁၂ လက်မ = တပေ၊ ၃ပေ = တဂိတ် ဆိုပြီး ဒေသခံတွေ အမွှန်းတင်ထားတဲ့ လမ်းဖြစ်တယ်။ Shading အကွက်ရဲ့ အနောက်ဖက် နယ်နမိတ်လမ်းမကြီးပေါ့။
တောင်ဖက်.. မန်ဝိန်း-ဆိုင်လော်- ၀ရာယန် - ဆဒုံးပါ တခုလုံးဟာ လမ်းမကြီးဖြစ်ပြီး ဆဒုံးပါ ဟာ မြို့နယ်ခွဲဖြစ်တဲ့အတွက် အစိုးရရုံးစိုက်ရာ နေရာဖြစ်တယ်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဆေးရုံ၊ အထက်တန်းကျောင်း ရှိတဲ့ နေရာဖြစ်ပြန်တယ်။ လမ်းတလျှောက်လုံးကလည်း အစိုးရအာဏာစက် သက်ရောက်ပြန်တယ်။
အရှေ့ဖက် ဆဒုံး၊ လဂျောင်၊ လဖိုင် ကနေ ကန်ပိုင်တီအထိလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ်နဲ့ ဇခုံတိန့်ယိန်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်တပ်များ ကြီးစိုးရာ နေရာဖြစ်ပြန်တယ်။
နောက်တခါ တရုတ်နိုင်ငံက သစ်ခိုးယာဉ်ပေါင်း ၅၀၀ နီးပါး ဖြတ်သန်းသွားတဲ့ နယ်စပ်အပေါက် ၂ ပေါက် ကလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ်ရဲ့ မြို့တော် ကန်ပိုင်တီ ဖြစ်ပြန်တယ်။ ပြီးတော့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ ထိန်ချုန်း နယ်ခြားထွက်ပေါက်လေး။
တရုတ်တွေကို ဖမ်းစဉ်က ကေအိုင်အေက ထုတ်ပေးထားတဲက သစ်ထုတ်ခွင့် လက်မှတ် ဆိုတာကို ပြန်တောင်းကြည့်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဒေသကို မြေပုံမှာ အရောင်ပြန်ချယ်ကြည့်တဲ့အခါ မြေပုံရဲ့ မြောက်ဖျားက ချန်ငေါဘွမ် ဆိုတဲ့ ဒေသ ဖြစ်နေတယ်။ တရုတ်ဖမ်းတဲ့ နေရာနဲ့ မိုင်ပေါင်း အနဲဆုံး ၈၀ လောက် ဝေးပါအုံးမယ် ထင်ပါရဲ့။ အကယ်၍များ အဲဒီက သစ်ခုတ်တယ် ဆိုရင် အနီးစပ်ဆုံး နယ်စပ်က ထွက်သွားမှာမို့ ချီဖွေမြို့ရဲ့ အောက်ဖက်အထိ ဆင်းလာစရာ မလိုပါဘူး။
မေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်းက ဆဒုံးပါမှာ စိုက်ပျိုးရေးစင်တာ ကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်က ဖွင့်လှစ်စဉ်က စင်တာ တာဝန်ခံအဖြစ် ကိုယ်တိုင် သွားထိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက် ဒီကျေးရွာတွေ မရောက်ဘူးတာ မရှိသလောက်။ World Concern မှာ အလုပ်လုပ်စဉ်က စီမံကိန်း ပြန်လည်သုံးသပ်မှု ခရီးစဉ်ကြောင့် တောနင်းခဲ့သေး။ ဒီလို နယ်မြေကျွမ်းကျင်မှုသာ မရှိခဲ့ရင် ဂျီးတော်လည်း မီဒီယာတွေ ပြောသမျှ ယုံမိပါလိမ့်မယ်။
ယာဉ် အစီးရေ ၅၀၀ နီးပါးဟာ
ဒီသစ်ခိုးထုတ်မှုဟာ မြန်မာ့တပ်မတော် နဲ့ လက်အောက်ခံ နယ်ခြားစောင့်တပ် ထိန်းချုပ်ရာ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဌာနဆိုင်ရာများ ကြီးစိုးရာ ဒေသမှာ ထုတ်ယူနေမှန်း သိသာပြိဖြစ်တယ်။
လုံခြုံရေး ယူထားတဲ့ အစောင့်တွေကို ဖြတ်ပြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို ၀င်လာတယ်။
သစ်ခုတ်လုပ်ငန်းဟာ အသံတိတ် လ်ုပလို့ရတဲ့ လုပ်ငန်းလည်း မဟုတ်။
ဌာနဆိုင်ရာ တခု မဟုတ် တခုက အသံမကြား၊ မမြင်၊ မသိ ဆိုတာလည်း မဖြစ်နိုင်။
ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ ဈေးပေါပေါနဲ့ လာခုတ်တဲ့ သစ်တွေ
ယာဉ်အစီးရေ ၄၇၀ ကျော် ဖမ်းမိတဲ့ နေရာမှာ ဘာဖြစ်လို့ လူက ၁၀၀ ကျော်ဘဲ ဖမ်းမိရပါသလဲ။ ကျန်တဲ့သူတွေကို ဘယ်လမ်းက လွှတ်လိုက်သလဲ။
ဒီလူတွေကို ဒီနေရာမှာ ဒီလို လာလုပ်ခွင့် ဆိုတာ မြန်မာ့ တပ်မတော် မပါဘဲ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ အခြား ဘယ်ဌာနတေါ ပါသေးသလဲ။
ဒါဆို... တရုတ်တွေကို တသက်တကျွန်း ပို့ရင်.. မြန်မာနိုင်ငံသား တရုတ်ကို လုပ်ခွင့်ပေးသူများကိုကော... ...
သတင်းမီဒီယာ အများစုဟာ MOI က ပေးသမျှကို ဘုရားဟောကဲ့သို့ လက်ခံနေအုံးမှာလား။
သစ်၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မီဒီယာ...
· · Sha
The World is watching the GENOCIDAL act of Min Aung Hlaing's Troops. Stop Intrusion to Kachin NOW.
at 7/23/2015 10:18:00 AM
အရပ်သားများအားခြိမ်းခြောက်ဖမ်းဆီး ရက်စက်ခြင်း၊ရွာမီးရှို လုယက်ခြင်းချက်ချင်းရပ်၊
ဘယ်သူမှအကျိုးမရှိသော စစ် ချက်ချင်းရပ်။
The World is watching the GENOCIDAL act of Min Aung Hlaing's Troops.
Stop Intrusion to Kachin NOW.
at 7/23/2015 10:11:00 AM
KIA,တပ်ရင်း (၇) ၏ မလိအောင် တိုက်ပွဲအတွင်း (၁၈.၇.၂၀၁၅)
ရက်နေ့ ၌ KIA,၏ မလိအောင်စခန်း အား လာရောက်ကျူးကျော်
တိုက်ခိုက် သော မြန်မာစစ်တပ်ထံ မှ KIA,က သိမ်းဆည်းရမိ သော
လက်နက်ခဲ ယမ်း အချို့ ။
18/7/2015 ya shani Masat (1) Dapba daju Dung(7) ginra
Mali Awng shawnglam post majan poi hta padang dip la
lu ai laknak machyu pala arung arai nkau .
at 7/23/2015 10:10:00 AM
Battles Rage in Kachin as NCA Talks Resume in Yangon
at 7/23/2015 10:07:00 AM
KIA's 7th Battalion troops with seized weapons (Photo: Umma Brang)
Fierce battles continued between Kachin Independence Army (KIA) and Burmese Army in Sumpra Bum Township as Ethnic Armed Organizations’ Senior Delegation and Burmese government’s representatives met to discuss Nationwide Ceasefire Accord (NCA) in Yangon.
A battle took place between KIA’s 7th Battalion troops and Burmese Army’s 381st, 385th, and 389th Light Infantry Regiments under Mogaung-based 3rd Military Operations Command (MOC-3) near Sumpyi Yang village on July 22 at 11 am. KIA source said at least three government soldiers including deputy commander of 385th LIR were wounded during the battle.
The two sides had been engaged in almost daily fights this week in Sumpra Bum area. KIA’s 7th Battalion troops engaged inabattle against Burmese Army troops at Nhkri Yang on July 21. Another battle took place at Lung Sha Yang on July 20. The two sides encountered near Htingbai village on July 19.
KIA source said Burmese Army’s Light Infantry Battalions (29th, 38th, 58th, 81st, 137th, 138th, 226th) and Light Infantry Regiments (381st, 385th, 389th) from Putao, Myitkyina, Mogaung and Thaton are currently deployed along Putao-Myitkyina-Sumpra Bum road since Burmese Army launched an attack on KIA positions on June 24-25. Troops from Myitkyina, Mogaung and Thaton were transported to Putao by air and traveled down to Sumpra Bum area by motorboats as the rain blocks motor roads.
About 1500 villagers including 271 school children and 24 teachers from Mali Yang, Lot Mai Yang, Jara Yang, Nhtan Zup, Hpung Ing Yang, and Sama Bum village have been displaced by recent fighting in Mali Yang area. Kachin Baptist Convention (KBC) ministers requested Kachin State government and Northern Regional Command to allow them to help IDPs but denied access to Mali Yang area by motorboats, the only option to reach to IDPs.
In northern Shan State, KIA’s 9th Battalion troops fought Burmese Army troops under 99thLight Infantry Division at Hu Hpyet Man Nawng village in Kutkai Township on July 20 at 9:45 am. The two sides encountered again in the afternoon and battled until 3:20 pm.
Col. Zau Tawng, KIA’s tactical commander, said Burmese Army’s military operation in Mali Yang area is intended to drive KIA troops west of the Mali river. “They want to restartadam project that was suspended in 2011 at Laza, located9miles from Mali Yang,” He said. ”Burmese authorities want access to Putao and Khaung Lan Phu to extract natural resources and KIA’s 7th Battalion is an obstacle for them.” Asia World company was awarded dam building projects along the Irrawaddy river includingadam in Laza by former military junta led by Senior General Than Shwe.
at 7/22/2015 10:13:00 AM
KIO,အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးရန်အသင့်ရှိ၊သို့သော်အာမခံချက်ရှိမှထိုးမည်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO သည် မြန်မာအစိုးရနဲ့ NCA တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း ၊ သို့ သော် အာမခံ ချက်ရှိမှသာ ထိုးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကို KIO ဒု-ဥက္ကဌ,UNFC, ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လ အား KNGသတင်းဌာန အယ်ဒီတာ ဦးနော်ဒင့် နှင့် အင်တာဗျူး။
Posted by Seng Jaw on Tuesday, July 21, 2015
Seng Jaw KIO,အပစ်ရပ်လက်မှတ်ထိုးရန်အသင့်ရှိ၊သို့သော်အာမခံချက်ရှိမှထိုးမည် ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO သည် မြန်မာအစိုးရနဲ့ NCA တနိုင်ငံလုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးဖို့ ဆုံးဖြတ် ထားကြောင်း ၊ သို့ သော် အာမခံ ချက်ရှိမှသာ ထိုးနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ကို KIO ဒု-ဥက္ကဌ,UNFC, ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး အင်ဘန်လ အား KNGသတင်းဌာန အယ်ဒီတာ ဦးနော်ဒင့် နှင့် အင်တာဗျူး။
at 7/19/2015 06:02:00 PM
Laimat wa sai laban Hpunau Hkristu hpung ni KBC hte hkrum zup ai shiga na lu ai,
Maigan du Hpu nau Rvwang niaWunpawng myit hkrum lam ndau shabra lai ka Online kaw mu hti sai.
Ya daini Blessing Sunday Hpunau Kahtawlik ni hte rau KTC ni Missa shang lawm ai shiga na lu sai.
An hte wunpawng ni yawng myit hkrum sai kumla nan rai sai.
Mahkra hpe dang di lu ai Yehowa Karaiashaman chye ju nan rai sai
Hkun Awng Nlam a
·Happy Super Blessed Sunday.
Dai ni Chyoi pra ai Laban shani hta e, Sara Kaba Palawng Naw Tawng woi awn let, Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung Chyum Dak Kasu (KTCS) Nawng Nang, na Chyum Jawng ma marai (100) gaw San Columban Nawku Jawng, jahpawt 8:00 a.m na Laban Nawku Missa hta shadu shang lawm ai hpe kabu gara mu lu ga ai. Ndai lachyum gaw gahkyin gumdin lamanpawt nhpang nan rai sai. Anhte yawng gaw langai sha rai ga ai. Dai ni na Laban Missa hpe Wa Sardaw Francis Daw Tang woi awn let, Manmaw Saradaw Ginwang na Wa Jaw Stephen Saw Phye Han mung shang lawm let Missa hkungga hpe nawng ya sai. Dai hpawt na Missa hta e, Nhtoi 19 ya shani, tai hpyen waaroi rip hkurm let si mat wa sai Saranum lahkawngamatu hte, Laiza Du tai jawng kaw hpaji sharin hkaja la nga ai shaloi tai hpyen waamanai makai rai ai sat lawat hta asak ap nawng kau sai Du jawng ma (23) niamatu alak mi akyu hpyi ap nawng ai lam galaw sai.